Funda malunga nendlela entsha kunye neentlobo ezahlukeneyo zetypography 2017 | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJorge Neira | | Idizayini yeMifanekiso, Imithombo, Izibonelelo
Ukufundeka kwezixhobo ngumba ophezu kwetafile kwaye sele iinkampani zithanda njalo IMIT, uGoogle kunye neMonotype Benza uphando oluthe kratya malunga nokufundeka kweemveliso zemihla ngemihla ukuya yenza iitekisi zifundeke ngokujonga nje.
1 Uhlobo lwefonti yexesha elizayo
2 Kodwa, yintoni injongo yale nkampani?
3 I-typography yinxalenye yembali yoluntu
4 Uhlobo lochwetheza luyahluka ngokuxhomekeka kwindawo
Uhlobo lwefonti yexesha elizayo
Ubudala beLab ilabhoratri enezimvo ezisebenzayo IZiko leTekhnoloji laseMassachusetts kwaye likhethe ngokukodwa kule minyaka idlulileyo yokufunda iindlela ezahlukeneyo zokuchwetheza, ukufundeka, kunye neminye imiba enxulumene noyilo kwaye ukunika ukuqaqamba okukhulu kolu hlobo lophando, benze i "Information Presentation Consortium", enamahlakani njengeMonotype eyaziwayo, ethi iminyaka ibalasele ngokuchwetheza nakwezinye iitekhnoloji ezinxulumene nesihloko.
Le nyani itsala umdla wee-greats ezinje ngeGoogle ezithatha inxaxheba ngokupheleleyo kule projekthi.
Kodwa, yintoni injongo yale nkampani?
Injongo yale nkampani kukubonelela ngeziphumo ezicace gca ngokunxulumene nokuba yintoni le typography ikhoyo ngoku kunye nendlela yokuyila into yangoku kwii-simulators kunye nolunye uvavanyo lokwenyani lokujonga ukufundeka kwesicatshulwa. Iimeko zezicatshulwa ziye zafundwa xa ziphantsi kwemeko ezahlukeneyo ezinje ukukhanya, okusingqongileyo, ubungakanani obukhulu kunye nobukhulu.
Kukho isizathu solu phando kwaye kufuneka senze ngqo nawe, ewe, uyifunde ngokuchanekileyo, ukusukela izicatshulwa zikho naphi na apho ujonga khona, kwisixhobo esincinci esifana neselfowuni okanye iwotshi yakho okanye kwinto enkulu njengeglasi yokwenyani ebonakalayo. Kwimoto nayo ungafumana isicatshulwa kwiphaneli yokulawula nakwezinye izixhobo kunye nezixhobo ozisebenzisayo. I-typography yanamhlanje kufuneka ivumelane nale nto, kuba ayisiyiyo yokufunda isicatshulwa kuphela, kodwa yonke into ijikeleze ukufunda nje "ukujonga ngokufutshane."
I-typography yinxalenye yembali yoluntu
Besingazukufikelela kweli nqanaba langoku lophuhliso ngaphandle kokuba i-typography iguqukile kwaye yile nto yenzekileyo kuzo zonke ezi nkulungwane, ukusukela ngoko Ubuchwephesha bunxibelelene ngakumbi ukusuka kwinto esicinga ngayo ukuya kwimisebenzi yethu yemihla ngemihla.
Ukuphela kwekhulu lama-XNUMX kuphawulwe inqanaba elitsha kubuchwephesha kwaye konke kubulelwe oko kubizwa ngokuba luhlaziyo lwedijithali kunye nezinto ezinje ngokushicilela idesktop okanye ulwimi lokushicilela lwePostScript. Inkqubo ye- Ixesha elitsha roman wazalwa ngo-1931 ukwaphula ukungunda kunye noko kwabonwa ngelo xesha kwaye umzekelo, i IHelvetica Ngo-1957 kuphawulwe ngaphambi nasemva kwaye kunefuthe elikhulu namhlanje.
Namhlanje sihlala uninzi lobomi bethu endleleni okanye kuhola wendlela kwaye ukufundeka yinto ebalulekileyo kule meko, ke ukuba kuziwa ekufundeni imiqondiso, kuya kufuneka kwenziwe kwimizuzwana. Intoni ukufundeka kubalulekile, izinto eziqhubekayo kufuneka zihlale zicocekile kwaye zinxulumene kakuhle nezinto ezinokufundwa ngekhephu okanye imvula, phakathi kwezinye iimeko zemozulu.
Uhlobo lochwetheza luyahluka ngokuxhomekeka kwindawo
E-United Kingdom, i Uhlobo lwezothutho kwaye kwimeko yeSpain ifonti elingana ne Uhola wendlela uGothic American for uhola wendlela kunye Uhlobo loTrafikhi eSpain yeendlela, nangona kwezinye iimeko ungayibona helvetica kananjalo.
Kwimeko yeJamani, i unobumba we-DIN 1451 ukusukela ngo-1936. Kodwa kuzo zonke iimeko, eyona nto isoloko ifunwa kukuba ukufundeka yeyona ilungileyo kwaye ithatha umgama nesantya njengezinto.
Inkqubo ye- ukuchwetheza ukusetyenziswa kwezixhobo eziphathwayo kwaye wazi ukuba zeziphi ezichaphazela kakubi xa kusenziwa utshintsho kubungakanani.
Ukuba ukuthetha ngeefonti kukushiye ufuna ukufumana ezinye ukuzama oko ukufundileyo kule post, emva koko sikushiya neklasikhi typography ebhalwe ngesandla okanye ebhalwe ngesandla, nefashoni kakhulu namhlanje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Jonga umkhwa omtsha wefonti kwikamva
Izixhobo ezinkulu kwi-Intanethi zokwenza ubuGcisa bePixel